Vagari Vochemachema neHurongwa hweKanzuru yeHarare Hwekuda Kukwidza Mitero yeMvura
Vamwe vagari vanoti hazvibatsire kuti kanzuru yeHarare ikwidze mutero wemvura iyo isiri kuvawanisa mvura yacho.
Kanzuru yeguta reHarare yazivisa nezvemitero yemvura nekuraswa kwetsvina mitsva inotarisirwa kubhadharwa nevagari kutanga medzi waMbudzi.
Mvura inenge ichitarisirwa kukwidzwa nezvikamu mazana matatu nemakumi mashanu kubva muzana, kana kuti 350 percent, kuvagari vekumisha yeveruzhinji, kuchitiwo kumisha inogara vashoma ichikwidzirwa nezvikamu mazana mana kubva muzana, kana kuti 400 percent.
Pari zvino vagari vekumisha inogara veruzhinji vari kubhadhara madhora makumi maviri emari yemunyika, kana kuti ZWL$20.00 pamvura inosvika kumarita zviuru zvishanu, kana kuti 0 to 5 cubic litres pamwedzi.
Vagari vekumisha inogara vashoma vanenge votarisirwa kubhadhara madhora zana emunyika kana kuti ZWL$100.00 kubva pamadhora makumi maviri nemashanu, kana kuti ZWL$25.00 pamwedzi pamarita anosvika zviuru zvishanu zvemvura.
Kuraswa kwetsvina kuchakwidzwawo kubva pamadhora makumi mana nerimwe emari yemunyika kuenda pamadhora zana nemakumi masere nemapfumbamwe emunyika kumisha yeveruzhinji.
Kumisha yevashoma vanenge votarisirwa kubhadhara madhora mazana matatu nemakumi masere nemasere kubva pamadhora makumi mapfumbamwe nerimwe emunyika pamwedzi yakanangana nekuraswa kwemarara.
Makambani ari kutarisirwawo kukwidzirwawo mitero yemvura pamwe nekuraswa kwetsvina kutanga musi wa 01 Mbudzi uyu.
Kukwidzwa kwemitero uku kuri kuitika panguva iyo misha inosanganisira Hopley, Epworth, Mabvuku neTafara vagary vari kunzi vave nenguva vasiri kuwana mvura, izvo zvave kuita kuti vamwe vechere mvura kubva mumakuva.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vanoti kukwidzwa kwemitero nekanzuru uku kwauya sechishamiso kuvagari vakawanda, sezvo vanhu vasina kutanga vagarwa navo pasi vachikurukura.
Asi VaShumba vanoti zvikonzero zvinogona kunge zviri kuita kuti kanzuru ide kukwidza mitero kuitira kuti ifambidzane nedhora reku America, iro vanoti riri kutengwa nemadhora makumi mapfumbamwe emunyika.
Vanotiwo vanowanisa kanzuru zvikwanisiro vanodawo kubhadharwa nemari yekunze, izvo zvinozosiya kanzuru pamwe nevagari vari parumananzombe.
Asi vamwe vagari vanoti hazvibatsire kuti kanzuru yeguta reHarare ivakwidzire mutero wemvura iyo isiri kuvawanisa mvura yacho.